Kala taga Farmaajo iyo Kheyre ma dhabbaa mise waa jilliin dhalanteed ah? | XORRIYA NEWS
Home Fikrado Kala taga Farmaajo iyo Kheyre ma dhabbaa mise waa jilliin dhalanteed ah?
Kala taga Farmaajo iyo Kheyre ma dhabbaa mise waa jilliin dhalanteed ah?
Ilo xil kas ah oo ku dhow ololaha raisalwasaarihii hore Xasan Cali Kheyre ayaa muujiyay shaki weyn oo ay ka qabaan run ahaanshaha waxa kajira khilaafka Madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha hay’adda muqaabaraadka oo dhinac ah iyo Xasan Kheyre oo dhinaca kale ah, sida ay qabaan rag isku arka warmoog oo taageeraya ololaha madaxtinimada Kheyre.
Xiriirka labada dhinac ayaa wali si xoog leh oo joogta ah u socda, hayeeshee waxa aysan xaqiijin Karin dhab ahaan waxa ay ka wada hadlaan, arrintan waxa kale oo xaqiijiyey siyaasiyiin Kheyre kula kala kulmay Nairobi iyo Istanbul.
In ka badan 20 qof oo isugu jira masuuliyiin, siyaasiyiin iyo madaxweynayaal hore oo siyaabo kala duwan ula kulmay taliyaha NISA iyo Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in ay jirto kala sheegasho heer sare oo u dhexeysa labada nin balse waxa la hubo ayaa ah in aan midkoodna midka kale si rasmi ah cabasho ama eedeyn warbaahinta u marin ilaa hadda oo ceyrintii Kheyre laga joogo saddex bil, taasina waxa ay abuurtay shaki kale.
Sida uu uga falceliyey doodaha shir ay fadhiyeen 12 qof oo kamid ahaa dadkii ugu dhowaa Kheyre habeenkii 25-kii July ayaa muujiyey in Nabad & Nolol wax islula hartay, oo aanay isu hiifin sidii lagu yaqiin dagaaladii siyaasadeed ee dhexmari jiray Wasiirka koowaad & madaxweynaha, waa uu saacado kadib markii uu Muqdisho tegey isaga oo ka soo safray Dhuusamareeb, kooxdiisu waxa ay ka sugeysay go’aanka uu ka qaadan doono xil ka qaadistii muranka dhalisay ee Golaha Shacabku uga eryey xilka.
Waxa uu ka horyimid soo jeedinta dhammaan dadkii shirka ku jiray isaga oo go’aansaday in uu tanaasulo soona jeediyey in tiisa lagu raaco, waxay ahayd tallaabo kale oo kooxda Kheyre shaki ku abuurtay.
Balse dhowr tallaabo oo u muuqday in lagu baabi’inayo shakigaas ayaa la qaaday sida in suuqa la geliyay in eedeymo musuq lagu soo oogi doono iyo in loo diiday inuu xilka wareejiyo, taas oo lagu dejiyay ra’yul caamka, looguna ekeysiiyay in labada kooxood ay hilib abeeso kala goosteen ama in ay col iyo cadaawad siyaasadeed kala qaateen.
Kheyre oo in ka badan saddex sano iyo bar xilka Ra’iisul Wasaaraha hayay ayaa si dhowna ula shaqeynayay dowladda Qatar isaga xiriir dhow oo toos ah la lahaa madaxda Qatar, safar uu ku wehliyay guddoomiyaha Bangiga dhexe oo kali ah ayuu June-2020 ku tagay Doha.
Sida ay qabaan dadkii wax ka qoray kulankaas oo Soomaali iyo shisheeyaba leh, Kheyre waxa lagu qanciyay inuu MW Farmaajo ka hor wareego isaguna noqon karo xulashada 2-aad balse xilligaas kuma uusan qancin.
Falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in Kheyre oo jilliinka ku wanaagsan iyo madaxtooyada oo sir-heynta ku wanaagsan ay wadajir u matalayaan masalsal siyaaseed oo Soomaaliya ku cusub, taas oo haddii ay suurtagasho dib u soo celin karta Kheyre oo madaxweyne ah iyo Farmaajo oo Ra’iisul wasaare ah.